Botco.ai: Vahaolana momba ny marketing amin'ny resaka HIPAA
Alakamisy, May 6, 2021 Alakamisy, May 6, 2021 Douglas Karr
Ny sehatry ny resaka HIPAA-mifanaraka amin'ny Botco.ai dia mitohy mandroso, manampy ny Marketing Contextual Chat ary ny tabilao fanadihadiana mandroso. Ny Marketing Chat Contextual dia ahafahan'ny mpivarotra manomboka resaka namboarina miaraka amin'ireo vinavina sy mpanjifa mifototra amin'ny fomba nitsidihany ny tranokalan'ny orinasa na ny fananan'ny haino aman-jery. Ny dashboard vaovao analytics dia manome fomba fijery lalina momba ny fanontaniana sy ny fitondran-tenan'ny mpitsidika. Miaraka amin'ny fampidirana Botco.ai amin'ny mailaka, CRM, ary rafitra marketing hafa, ny Contextual Chat Marketing dia mitondra haavon'ny personalization ho an'ny resaka.
Talata, Novambra 10, 2020 Talata, Novambra 10, 2020 Douglas Karr
Chatbots dia manohy miha be pitsiny kokoa ary manome traikefa tsy misy tohiny kokoa ho an'ireo mpitsidika tranonkala noho ny tamin'ny herintaona lasa izay. Ny famolavolana fifanakalozan-kevitra dia ivon'ny fanapariahana chatbot mahomby rehetra… ary ny tsy fahombiazana rehetra. Chatbots dia aparitaka amin'ny alàlan'ny automating fisamborana sy ny fahaiza-mitarika, ny fanohanan'ny mpanjifa ary ny fanontaniana napetraka matetika (FAQs), ny automatisation an-tsambo, ny tolo-kevitry ny vokatra, ny fitantanana ny olombelona ary ny fanangonana, ny fanadihadiana ary ny fanontanina, ny famandrihana ary ny famandrihana. Fanantenan'ny mpitsidika tranonkala
Freshchat: Chat sy chatbot mitambatra, maro fiteny, mifangaro ary ho an'ny tranokalanao
Alarobia, Oktobra 7, 2020 Alarobia, Oktobra 7, 2020 Douglas Karr
Na mitondra fiara ianao dia mitondra mankany amin'ny tranokalanao, miantsena ny mpiantsena, na manome ny fanohanan'ny mpanjifa… antenain'izy ireo amin'izao fotoana izao fa manana fahafaha-manao chat miaraka ny tranonkala tsirairay. Na dia tsotra aza izany dia betsaka ny fahasarotana amin'ny resaka chat… hatramin'ny fibaikoana ny resaka, ny fiaretana amin'ny spam, ny valiny mandeha ho azy, ny fivezivezena… mety ho aretin'andoha tokoa izany. Ny ankamaroan'ny sehatra fifampiresahana dia tsotra… fampitaovana fotsiny eo anelanelan'ny ekipa mpanohana anao sy ny mpitsidika ny tranokalanao. Mamela be izany
Alahady 10 Febroary 2019 Alatsinainy 11 Febroary 2019 Douglas Karr
Tsy misy andro iray izay tsy nanaterako latsa-bato, fanadihadiana na fangatahana valiny. Raha tsy tena afa-po aho na sosotra amin'ny marika iray, dia mamafa ilay fangatahana fotsiny aho ary mandroso. Mazava ho azy, isaky ny indray mandeha aho dia mangataka valiny ary nilaza fa hankasitrahana tokoa aho ka hahazo valisoa aho. Feedier dia sehatra fanehoan-kevitra mamela anao hanangona valiny amin'ny fanomezana valisoa ny mpanjifanao.